SAWIRRO-Dhalinyarada Garoowe oo bilaabay inay gubaan bakhtiga yaacsan hareeraha laamiga magaalada. – Radio Daljir
SAWIRRO-Dhalinyarada Garoowe oo bilaabay inay gubaan bakhtiga yaacsan hareeraha laamiga magaalada.
Janaayo 23, 2017 5:46 b 0
Qaar kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa ku dhaqaaqay olole ballaaran oo ay ku nadiifinayaan xoolaha bakhtiyey ee gaadiidka sida dadka reer guuraaga ah ku daadiyeen hareeraha wadada laamiga ah.
Dhalinyaradaan oo isu soo urursaday si madax banaan kadib markii ay u adkaysan waayeen dhibaada caafimaad iyo midda gaadiidka kasoo gaaraysa bakhtiga xoolaha gaar ahaan ariga ayaa watey gaadiid ay kusoo kireeyeen lacag ay iska ururiyeen iyagoona dab meelo banaan ah ku qabad siinayey bakhtiga xoolaha.
Wajiga 1aad ee ololahaani oo ka bilowday banaanka bari ee magaalada Garoowe ayaa maanta gaarey buundada dooxada Janteela oo u dhexaysa deegaamada Sin-ujiif iyo 22aad ee dooxada Nugaaleed.
Qaar kamid ah dhalinyarada ololahaan hormuudka ah oo kahadlayey goobihii lagu gubayey bakhtiga ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howshaan mutadawacnimada ah, waxaana ay ka codsadeen dhalinyarada kale inay horumarka dalka u kacaan.
XS-Cabdirashiid Bashiir Maxamuud
DHEGEYSO-Kulan looga hadlayey korukaca dollarka oo Qardho kadhacay.